विद्युतीय धरापमा सहर - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
विद्युतीय धरापमा सहर
फागुन २७, २०७४ 2516 ऊर्जा खबर/काठमाडौं
उपत्यकाभित्र चक्रपथ, व्यस्त सडक तथा ठूला व्यापारिक कम्प्लेक्स वरिपरि अचेल एउटै कुरा देखिन्छ । त्यो हो, घरसँगै जोडिएको विद्युतीय पोल र गुचुमुच्चु पोको पारेर राखिएको तार ।
समस्या काठमाडौं उपत्यकाको मात्र होइन । देशका ठूला सहर तथा जनघनत्व बढ्दै गएका क्षेत्रमा पनि बढिरहेको छ । विराटनगर, वीरगन्ज, हेटौंडा, पोखरा, बुटवल, नेपालगन्ज, धनगढी तथा सहरीकरण हुँदै गएका सहायक सहरमा विद्युतीय तार तथा पोल व्यवस्थाको समस्या टड्कारो बन्दै गएको छ ।
घरमा टाँसिएको पोल तथा माक्किएर पुरानो हुँदै गएको तारले कति खतरा निम्त्याउँछ भन्ने सामान्य हेक्का सर्वसाधारणले समेत राख्दैनन् । उता घरमा जोडिएको पोल सार्न वा फेर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई महिनौं लाग्छ ।
प्राधिकरणको पोलमा विद्युतीय तारमात्र हुँदैन । त्यहाँ नेपाल टेलिकम, इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको पनि तार पोको पारेर राखिन्छ । यसले घरको सुरक्षामा अझ खतरा उत्पन्न गराएको हुन्छ ।
विद्युतीय तार घरको झ्याल छुने गरी राख्दा वा उच्च भोल्टेजका वितरण लाइन छतबाट लैजाँदा विभिन्न दुर्घटना हुने गरेका छन् । यस्तो गैरजिम्मेवारी क्रियाकलापबाट सयौंको ज्यानसमेत जाने गरेको छ ।
समस्या न्यूनिकरण गर्न न सरोकारवाला निकायको ध्यान जान्छ न त स्थानीयबासी वा घरधनीले नै चासो दिने गरेका छन् । असुरक्षित तरिकाले विद्युत वितरण गर्दा जनधनको क्षति त हुने नै भयो । यसले सहरलाई दिनहुँ कुरुप बनाउन सहयोग गरेको छ ।
उपत्यकामा सडक विस्तारसँगै प्राधिकरणले सडकको दायाँबायाँ घरसँगै जोडेर पुल गाड्ने गरेको छ । केही वर्षयता काठमाडौं ललितपुर भक्तपुरका अव्यवस्थित विद्युतीय तार तथा पोलका कारण सयौंको ज्यान गएको छ ।
सडक विस्तार गर्न अनिवार्य पोल सार्नुपर्छ । प्राधिकरणले यसरी पोल सार्दा स्थानीयको घर नजिक गाडिदिन्छ । यसमा घरधनीले सामान्य विरोध गर्छन् तर यसको सुनुवाई हुँदैन । सहरी क्षेत्रमा विद्युत वितरण गर्न पछिल्लो समय एबिसी केबल प्रयोग गर्ने गरिएको छ ।
पुरानो हुँदै जाँदा एबिसीको बाहिरी खोल वा तारमा बेरिएको प्लास्टिक निस्कने र त्यसले व्यक्ति वा घरमा छुने गरेको छ । जुन विद्युतीय दुर्घटनाको कारण बन्छ ।
त्रिपुरेश्वर–कंलकी सडक विस्तार भइरहेको छ । यस क्षेत्रमा पोल गाड्ने स्थान नहुँदा घरमा जोडेरै गाडिएको छ । घरसँगै जोडेर पोल गाड्ने नियम छैन । तर, ठाउँ अभावले पोल गाड्न व्यक्तिको घर नजिक नै रोज्नुपर्ने बाध्यता रहेको प्राधिकरण अधिकारीको तर्क छ ।
प्राधिकरणले घरमै टाँसेर पोल गाडेपछि चिन्तित बनाएको टेकुका स्थानीय जयलाल महर्जनले बताए । ‘सुरुमा त ठीकै थियो अहिले घरसँगै जोडेर विद्युतको पोल गाडेपछि त्रास बढेको छ,’ उनले भने, ‘विद्युत त चाहिन्छ तर प्राधिकरणले घरसँगै पोल गाडेर त्रास थप्ने काम गरेको छ, यसको विकल्प खोज्नुपर्छ ।’
बजार क्षेत्रमा सडक विस्तारसँगै प्राधिकरणलाई विद्युतीय पोल व्यवस्थापन गर्न चुनौती पनि थपिएको छ । सडक फराकिलो बनाउन भत्काउनुपर्ने घर, ढल निकासलगायत समस्याले पनि पोलको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
प्राधिकरणले वितरण लाइन भूमिगत विस्तार गर्ने योजना अघि बढाएको छ । तर, प्रभावकारी रूपमा काम अघि बढेको छैन । पहिलो चरणमा महाराजगन्ज र रत्नपार्क क्षेत्रमा वितरण लाइन भूमिगत बनाइँदै छ । प्राधिकरणले उक्त कामका लागि ठेक्का प्रक्रिया पनि सुरु गरेको जनाएको छ ।